Isusa iphunga elingathandeki elondolo elondolo ngaphakathi!
2.Susa isikhunta nokukhubazeka esigubhini somshini wokuwasha !! (Ngemuva kwamaviki ama-2-3 wokusetshenziswa kwansuku zonke)
3.Isusa ukungcola emgodini we-drainage !!
4.Ingasetshenziswa ngaphezu kwezikhathi ezingama-300 (cishe unyaka owodwa).
5.Susa i-magnesium enetheni ngemuva kwezikhathi ezingama-300 bese uyisebenzisa engadini noma ezimbizeni zezimbali.
Ukusetshenziswa: Kusetshenziswa njengemikhiqizo esizayo yokukhipha iphunga, ukuhlanza nokuhlanza izingubo zikakotini, ilineni kanye nemicu yokwenziwa.